“အတွေးစလေးတွေ”: ဘာလာပေးပေး မရချင်ဘူး . . . ဘယ်သူနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူး . . .
ဦးဟန်ကြည် .. ကျနော်လည်း အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို ၅ နှစ် သင်ပြီးတော့ စာသင်ကြားရေးပိုင်း ပညာရေးပိုင်းမှာလုပ်တဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေ ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့မြင်လာပါတယ် ။ ဒါကြောင့် BEng, MSc ထက် BEd, MEd ရဲ့ အရေးပါတာကို စိတ်ထဲခံစားမိလာတယ် ။ ပညာရေးပိုင်းကိုပဲ ဇောက်ချလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။